St. Maarten: Ndị ọbịa gbanyere mkpọrọgwụ nke ọma anaghị achọ nnwale COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Sint Maarten na -agbasa » St. Maarten: Ndị ọbịa gbanyere mkpọrọgwụ nke ọma anaghị achọ nnwale COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Sint Maarten na -agbasa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Maarten: Ndị ọbịa nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa adịghị mkpa nyocha COVID-19.
Onye minista Omar Ottley kwupụtara n'oge mkparịta akwụkwọ akụkọ na ruo na Nọvemba 1, 2021, ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa agaghịzi achọ nnwale COVID-19 ịbanye St. Maarten.
Iwu ọhụrụ dị maka ndị njem ejiri ọgwụ mgbochi ọrịa RIVM na WHO kwadoro ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma.
Ibu nje nke onye nwere ọgwụ mgbochi zuru oke, onye butere COVID-19, na-agbada ngwa ngwa karịa onye na-enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa.
Na St. Maarten, enwere ọnụọgụ ọnwụ dị 1.6%, nke 0.04% gbara ọgwụ mgbochi nke ọma.
Onye Minista Ahụike Ọha, Ọha na Ọha na Ọha, Omar Ottley kwupụtara n'oge mkparịta akwụkwọ akụkọ na ruo na Nọvemba 1, 2021, ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa agaghịzi achọ nnwale COVID-19 ịbanye. Maarten.
Nke a ga -adị naanị maka ndị njem ejiri ọgwụ mgbochi nke RIVM na òtù WHO gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma. Onye ozi ahụ gara n'ihu kwuo na nke a bụ ihe ministri a na -eleba anya nwa oge, site na nyocha e mere nke ọma kpebiri ịga n'ihu na nke a.
Nchọpụta egosila na ibu nje nke onye nwere ọgwụ mgbochi zuru oke, onye bu COVID-19, na-agbada ngwa ngwa karịa onye na-enweghị ọgwụ mgbochi ọrịa. Nke a pụtara na ọ bụ ezie na enwere oge ezumike ole na ole n'ime ndị nwere ọgwụ mgbochi zuru oke, ohere nke ndị a gbasara ịgbasa nje ma ọ bụ ịrịa ọrịa siri ike nke ukwuu.
Onye ozi ahụ kwuru na ọgwụ mgbochi ahụ na -enye ahụ gị ohere ịlụso nje ọgụ ozugbo ọrịa ahụ si na imi imi banye na n'ọbara. A na -ezere ọrịa siri ike site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, n'ihi na ahụ gị ga -adị njikere nke ọma ịlụso nje ọgụ.
On Maarten, enwere ọnwụ ọnwụ dị 1.6%, nke 0.04% gbara ọgwụ mgbochi n'ụzọ zuru oke. Edere pasentị yiri nke ahụ maka ọnụọgụ ndị ụlọ ọgwụ ọgwụ mgbochi nke ọma. Ottley kwuru, "Nke a na -egosi na ọgwụ mgbochi ọrịa a na -arụ ọrụ nke ukwuu na anyị nwere ike ịga n'ihu na -enye ohere ka ndị nwere ọgwụ mgbochi zuru oke banye na -enweghị nyocha."
Minista Ottley kwupụtara na atụmatụ mkpirikpi oge ya bụ imepụta COVID-19 mgbake Digital COVID-19 Certificate (DCC), nke na-enye ndị mmadụ ohere ịdebanye aha ọrịa ha gara aga wee gosipụta ihe akaebe nke mgbochi anụ ahụ.
Biko rịba ama na ihe achọrọ maka ndị na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ka bụ otu, maka nkọwa ndị ọzọ gaa na webụsaịtị gọọmentị.
Biko lee Ndepụta ọgwụ mgbochi ọrịa nke WHO kwadoro n'okpuru:
Pfizer / BioNTech (FDA kwadoro)
Janssen (Johnson na Johnson)
Sinopharm (Beijing) BBIBP